सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा भन्छन, लोकतन्त्रमाथि कुनै किसिमको खतरा छैन ! - नेपालबहस
बहुमुखी क्याम्पसमा तोडफोड
सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा भन्छन, लोकतन्त्रमाथि कुनै किसिमको खतरा छैन !
८ भदौ, बुटवल । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवम सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले लोकतन्त्रमाथि कुनै पनि किसिमको खतरा नरहेको बताएका छन् ।
प्रेस सङ्गठन रुपन्देहीले आइतबार बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले जनताको त्याग, तपस्या र बलिदानीबाट प्राप्त गणतन्त्र त्यति सजिलै नढल्ने बताए ।
लोकतन्त्रमाथि विभिन्न किसिमले हमला गर्ने तत्व सक्रिय भए पनि लोकतन्त्र खतरामा नरहेको मन्त्री बाँस्कोटाले बताए । उनले भने “लोकतन्त्रमाथि हमला गर्ने तत्वसँग सदैव सचेत रहनुपर्छ ।” जनताले स्थापना गरेको गणतन्त्र जनताले नै प्रतिस्थापन गर्न सक्ने उनले बताए ।
“धमिलो पानीमा माछा मार्न पल्केकाहरू कहिले धर्मका नाममा, कहिले वंशजका नाममा सल्बलाई रहेका छन्”, मन्त्री बाँस्कोटाले भने । सरकारले मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने नभई नियमन मात्रै गर्ने उनले बताए । त्यसैका लागि सरकारले मिडियासम्बन्धी नयाँ कानून ल्याउन लागेको उनले स्पष्ट पारे ।
मन्त्री बाँस्कोटाले सरकारले ल्याउन लागेको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेकबाट सञ्चारकर्मी नडराउन आग्रह गर्दै कानूनमा रहेर काम गर्ने कुनै पनि मिडियाकर्मीलाई त्यसले असर नगर्ने स्पष्ट पारे । उनले जनताको अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुन्ठित गर्ने सरकारको कुनै मनसाय नरहेको बताए ।
“मूल प्रभावका सञ्चार संस्था कसैको लोभ, धाक, धम्कीको प्रभावमा नपरी व्यवसायमा इमान्दार हुनुपर्छ”, उनले भने, “सनसनीपूर्ण बनाएर अफ्ठ्यारो पर्ने र उन्मुक्ति खोज्ने प्रवृत्ति राम्रो होइन ।” सञ्चारजगत सरकारप्रति नभएर नेपाल र नेपाली जनताप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार बन्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
मिडियाको दुरुपयोग रोक्न सरकार कानून निर्माणमा लागेको मन्त्री बाँस्कोटाले बताउनुभयो । सामाजिक सञ्जालले मूल प्रवाहको मिडियालाई निर्देशित गर्न नसक्ने र त्यस्तो भएमा समाज अराजकतातर्फ जाने भएकाले सचेत हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । “पछिल्ला समयमा सामाजिक सञ्जालमा विकृति बढ्दै गएको छ, कुनै पनि विषयमा भिडले कानूनलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन”, मन्त्री बाँस्कोटाले भने।
टेलिभिजनमा क्लिनफिड र समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणाली सरकारले लागू गराएरै छाड्ने मन्त्री बाँस्कोटाले बताए । राज्यका सबै निकायमा कार्यसम्पादन सम्झौताको व्यवस्था पहिले पनि भएको तर कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै उनले त्यसलाई वर्तमान सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको बताए ।
उनले कार्यसम्पादन सम्झौतापश्चात् सचिवको सरुवाले मन्त्रालयको कामकाज कुनै प्रभावित नहुने बताए । मन्त्री बाँस्कोटाले भने “एउटा सचिवसँग गरेको सम्झौता अर्को सचिवसँग कार्यान्वयन नहुने भन्ने हुँदैन ।”
अघिल्लो लेखभेन्यु टेष्ट ड्राइभ गर्ने ग्राहकलाई पुरस्कार !
अर्को लेखअमेजन क्षेत्रमा डढेलोको समस्या चर्चा गरिएजस्तो छैन
‘मागपत्र’ बोकेर विकासे अड्डा धाउने युगको अन्त्य : मन्त्री बाँस्कोटा
राज्यले धार्मिक आधारमा कसैलाई नागरिक अधिकार दिँदैन
सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा भन्छन्, पाँच वर्षभित्र गरीबी दर ३ प्रतिशतले घट्छ
१ अर्ब ४० करोडको कारोवार हुँदा, बजारले १३०० को विन्दुलाई बलियो टेवा बनाएकै हो ?